May 8, 2021 - Cele Fans
May 8, 2021 Cele Fans Comments Off on မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး အောင်မြင်မည်ဟု ပြည်သူ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းက ယုံကြည်ကြောင်း စစ်တမ်း ထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်ခြေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Researcher Myanmar အဖွဲ့က စစ်တမ်းပြုလုပ်ရာ ဖြေဆိုသူ ၈၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းက တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ခံရာမှာ နေပြည်တော်အပါအဝင်၊ တခြား တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခုလုံးပါအောင် ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်သူ ၈၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ အောင်မြင်မည်မထင်ဟု ဖြေကြားသည့်သူ ၄ ဒသမ […]
May 8, 2021 Cele Fans Comments Off on ကလေးရှိတဲ့ အိမ်တိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက်
ကလေးတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိဘတွေ သတိထားရမယ့် ကိစ္စတွေက အများပြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၃ နှစ် ၊ ၄ နှစ် အရွယ် ကလေးတွေကို မတော်တဆ အသက်အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် စောင့်ကြည့်ရတာ တကယ်ကို မလွယ်လှပါဘူး။ ဒီလို အရွယ်ကလေးတွေဟာ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ဆော့တတ်လွန်းတော့ တစ်ယောက်ထည်း လွတ်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေး ဟာ တစ်ယောက်ထဲ တကုတ်ကုတ် ဆော့နေရင် […]
May 8, 2021 Cele Fans Comments Off on “ညကြီး (၈) နာရီကျော်မှ သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက လက်ဖက်ရည် နဲ့ ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲ လိုက်ပို့ခိုင်းတဲ့ အဖြစ်”
မနေ့ည၈နာရီကျော်ကျော်လောက်ကကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့သောက်နေကျဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံကမရှိတော့ကိုရင်လေးထိုင်နေတဲ့စားပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်စားပွဲထိုးကောင်မလေးကကျနော့်အတွက်…. လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့….. ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်….ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…..ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ….. အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. အခုထိမရသေးဘူးးအမေကမျှော်နေတော့မှာပဲ….သူကပြန်ဖြေတော့… ကျနော်သောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဖိုးရယ်ကိုရင်ဟာရယ်ပေါင်းရှင်းလိုက်တယ်….. ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုရင့်အမေဆီကိုလိုက်ပို့ပေးပါ့မယ်….. တပည့်တော်မှာဆိုင်ကယ်ပါပါတယ်ဘုရားလို့ပြောပီးးလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်… ကိုရင်ကသူ့အမေရှိတဲ့နေရာမြို့ရှောင်လမ်းဘက်ကိုမောင်းခိုင်းပါတော့တယ်….. မြို့ရှောင်လမ်းထဲရောက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ…. ကျနော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ညက၈နာရီကျော်ပီလေ…..သင်္ချီုင်းကုန်းဆိုတာတိတ်ဆိတ်နေတာကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထလာတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုပီးအားတင်းဝင်လိုက်တယ်….. အဲဒီမှာကိုရင်ကဆင်းပီးဓါတ်မီးလေးနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး…..အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံးပေါ်တက်ထိုင်ပြီး…… အမေအမေကြိုက်တဲ့ချိုစိမ့်ရယ်ပဲနံပြားရယ်….သားလာပို့တာပါသားကိုခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်တဲအမေမသေခင်တုန်းကမပြုစုခဲ့ရတာတွေ…. သားအခုမှယူကြုံးမရဖြစ်နေပြီအမေရယ်တဲ့အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ကိုရင့်ကအဲ့ဒါကိုရင့်အမေရဲ့အုပ်ဂူလေးပဲတဲ့….. မသေခင်တုန်းကလုပ်မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့အခုလာပို့တာပါလို့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်းရင်း….ကျနော်သူ့ကျောင်းထိပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်…. ကျနော်သံဝေဂတစ်ခုရလိုက်တယ်…..သူတောင်သေသွားတဲ့မိခင်ကိုသင်္ချီုင်းကုန်ထိလိုက်ကျွေးနေသေးတာ…. ငါတို့ကအခုအသက်ရှိနေတဲ့မိခင်ကိုပိုတောင်ဂရုတစိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက်ပီလေ….. ကိုယ့်ကိုမွေးပေးတဲ့မိခင်ဆိုတာတစ်သက်လုံးတစ်ယောက်ပဲရှိတာမို့….အစားထိုးးမရတဲ့အနန္ဒဂိုဏ်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ကိုအသက်ရှင်နေတုန်း….. လုပ်ကျွေးသမှုပြုကြရင်းနဲ့ကျေးဇူးးဆပ်ကြရအောင်သူငယ်ချင်းတို့ရေအခုတော့…..ကျနော်ရယ်ကိုရင်ရယ်သင်္ချိုင်းကငြိမ်သက်နေတဲ့အုပ်ဂူလေးးရယ်… Credit:တောင်ပံနီလူလေး မေန႔ည၈နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကက်ေနာ္လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖို႔ေသာက္ေနက်ဆိုင္ထဲကိုဝင္လိုက္တယ္….. ထိုင္ခုံကမရွိေတာ့ကိုရင္ေလးထိုင္ေနတဲ့စားပြဲမွာပဲဝင္ထိုင္လိုက္တယ္စားပြဲထိုးေကာင္မေလးကက်ေနာ့္အတြက္…. လက္ဖက္ရည္ခြက္ခ်ေပးေနတုန္းကိုရင္ေလးကေမးလိုက္တယ္…. ဒကာမေလးးကိုရင္မွာထားတာၾကာပီေလမရေသးဘူးးလားတဲ့….. က်ေနာ္လည္းးမေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေမးလိုက္မိတယ္….ကိုရင္ကဘာမွာထားတာလဲလို႔…..ခ်ိဳစိမ့္နဲ႔ပဲနံျပားမွာထားတာ….. အဲဒါနဲ႔က်ေနာ္လည္းးျပန္ေမးလိုက္တယ္…..ကိုရင္ကဒီအခ်ိန္စားလို႔မရဘူးေလဆိုေတာ့….မဟုတ္ဘူးးအေမ့အတြက္တဲ့….. အခုထိမရေသးဘူးးအေမကေမွ်ာ္ေနေတာ့မွာပဲ….သူကျပန္ေျဖေတာ့… က်ေနာ္ေသာက္တဲ့လက္ဖက္ရည္ဖိုးရယ္ကိုရင္ဟာရယ္ေပါင္းရွင္းလိုက္တယ္….. ၿပီးေတာ့တပည့္ေတာ္ကိုရင့္အေမဆီကိုလိုက္ပို႔ေပးပါ့မယ္….. တပည့္ေတာ္မွာဆိုင္ကယ္ပါပါတယ္ဘုရားလို႔ေျပာပီးးလိုက္ပို႔ေပးလိုက္တယ္… ကိုရင္ကသူ႔အေမရွိတဲ့ေနရာၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းဘက္ကိုေမာင္းခိုင္းပါေတာ့တယ္….. ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းထဲေရာက္ေတာ့ဘယ္ဘက္ကိုခ်ိဳးဝင္ခိုင္းတယ္ၿပီးေတာ့သခ်ႋဳင္းကုန္းထဲဝင္ခိုင္းတယ္ဗ်ာ…. […]
“အသက် ၁၀၀ ကျော်ပြီ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက် တည်းနေကာ ကိုယ်တိုင် ထင်းခွေ ရေခပ် သစ်ပင်စိုက် နေတဲ့ ဖွားသက်ရှည်”
May 8, 2021 Cele Fans Comments Off on “အသက် ၁၀၀ ကျော်ပြီ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက် တည်းနေကာ ကိုယ်တိုင် ထင်းခွေ ရေခပ် သစ်ပင်စိုက် နေတဲ့ ဖွားသက်ရှည်”
မတွေ့တာ သုံးနှစ်လောက် ကြာသွားတဲ့ နောက် အဖွား အသက် လေးနှစ်လောက် ပြန်ငယ် သွားတယ်။ ရယ်စရာတော့ ကောင်းသား။ အရင်တစ်ကြိမ်က အဖွားရဲ့မြေး ပြော ပြတာက အသက်၁၁၀။ အခု တစ်ကြိမ် အဖွားရဲ့ မြေးမလေး ပြော ပြတာက ၁၀၆ နှစ်တဲ့။ အဖွားက ပူတာအိုက ရဝ မ် လူမျိးပါ။ တကယ်တော့ အသက် ၁၀၀ ဝန်းကျ င် ရောက်နေတဲ့ […]
မြစ်ကြီးနား နှင့် အင်းတော် အကြား စီပိန်းတံတားမိုင်းခွဲခံရ၍ ကားအစီးရာချီပိတ်မိနေ
May 8, 2021 Cele Fans Comments Off on မြစ်ကြီးနား နှင့် အင်းတော် အကြား စီပိန်းတံတားမိုင်းခွဲခံရ၍ ကားအစီးရာချီပိတ်မိနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော် နှင့် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အကြား စီပိန်းတံတားသည် မေ ၇ ရက်သန်းခေါင်ယံက မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရ၍ ခရီးသည်တင်ကားများ ဖြတ်သန်းမရဘဲ ရာချီ ပိတ်မိနေကြောင်း ပိတ်မိနေသော ခရီးသွားများထံမှ သိရသည်။ ” မြစ်ကြီးနား ကို ဆက်သွားလို့မရဘူး။ မနက် ၁ နာရီကတည်းက ပိတ်မိနေတာ။ ကားအစီး တစ်ရာကျော် ၂ နှစ်ရာဝန်းကျင်ရှိတယ်” ဟု ခရီးသည်တစ်ဦးကပြောသည်။ ပေါက်ကွဲမှုသည် မေလ ၇ ရက် […]
May 8, 2021 Cele Fans Comments Off on ရွာလယ်တိုက်ပျက်ကြီး ထဲမှာနေတဲ့စစ်သားတွေ…ငိုနေကြတယ်
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ရွာလယ်ပိုင်းမှ လှရွှေ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့မှ ညောင်ပင်ကြီးအောက်ရောက်လာသည်။ ” ဟေ့ကောင်တွေ… ရွာလယ်တိုက်ပျက်ကြီး ထဲမှာနေတဲ့စစ်သားတွေ…ငိုနေကြတယ်ကွ…” သတင်းထူး၊ သတင်းဦးကို အမောတကော ပြေးလာပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ”ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲကွ…” တအံံ့တသြ မေးမိကြသောစကား။ ” မသိဘူးကွ…၊ တချို့က တိုက်နံရံခေါင်းနဲ့ ဆောင့်ပြီး ငိုတာကွ…။ တချို့ကတော့ တိုက်နံရံ ကို လက်သီးနဲ့ထိုးပြီိး ငိုတာကွ…” ”လာကွာ… သွားကြည့်ရအောင်…” […]